Tafatafa iarahana amin’i Haitham Sabbah · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2018 3:59 GMT
Noresadresahan’ilay mpanao gazety Italiana, Paola Caridi, manoratra ho an'ny masoivohom-baovao, Lettera22 vao haingana ny tonian-dahatsoratra namantsika avy any Afovoany Atsinanana/Afrika Avaratra Haitham Sabbah. Mifantoka amin'ny fanontaniana sasantsasany ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Afovoany Atsinanana ny resak'izy ireo. Nahoana no mibilaogy ny olona – noho ny antony manokana ve sa politika? Fomba hisorohana ny sivana amin'ny media ve ny bilaogy? Nahoana no mibilaogy amin'ny teny Anglisy ireo mpiteny Arabo marobe? Tamin'ny famaliana ity fanontaniana farany ity, miresaka momba ny anjara toerana lehibe raisin'ny bilaogy amin'ny fifandraisana amin'ny Afovoany Atsinanana sy izao tontolo izao i Haitham :
Mino aho fa ny bilaogy amin'ny teny anglisy avy amin'ireo bilaogera Arabo dia manana tanjona hafa noho izay nosoratana tamin'ny teny arabo, ary izany no manakatra ny any andrefana indrindra, ary fiteny voalohany ho an'ireo izay monina ivelan'ny tontolo arabo.
Ampolony taona vitsy, dia tsy nisy fantsom-pifandraisana misokatra teo amin'ny Atsinanana sy ny Andrefana. Ny bilaogy no varavarana lehibe misokatra ho an'ny Arabo mahay fiteny roa mba hipaka amin'izao tontolo izao. Mba hanombohana ny dingana “mianatra ny manala ny fianarnaa” mihatra amin'ny besinimaron'ny tsy Arabo, mba hanitsiana sy/na hanavaozana ireo finoana sy soatoavina taloha momba ny Arabo, ny kolontsainy sy ny fiarahamoniny ary hanehoana fomba fijery hafa fa tsy ny asehon'ny fomba fijery ao an-toerana sy any ivelany. Tena fitaovana ilaina hanokafana ny saina indrindra ny bilaogy amin'ny teny anglisy.
Iray amin'ireo toetra mahaliana ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Afovoany Atsinanana ny harenan'ireo bilaogera tahaka an'i Haitham izay mibilaogy ankarihary hihaika ny fomba fijery ny Afovoany Atsinanana ao amin'ny fampahalalam-baovao Amerikana Avaratra sy Eoropeana. (Jereo ny pejy “mombamomba” an'i Mahmoud Al-Yousif ao amin'ny bilaoginy, Mahmoud's Den, momba izany lohahevitra izany: “Ankehitriny dia manandrana manilika ny sary izay iaretan'ny Miozolomana sy ny Arabo aho – avy amin'ny zavatra ataonay manokana ary holazaiko hoe ho an'izao tontolo izao. Tsy misiônera aho ary tsy te-ho tonga amin'izany. Mitantana tranonkala aterineto maromaro aho izay natao manokana ho amin'izany fotsiny, mamorona fahatakarana tsaratsara kokoa fa tsy isika rehetra no voakorontana amin'ny famotehana izao tontolo izao. “)
Tsara vakiana avokoa ny tafatafa rehetra raha liana amin'ny fahatakarana tsara kokoa ny bilaogy avy any Afovoany Atsinanana ianao.